ပင်ပန်းနွမ်းနယ်များသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်မောပန်းခြင်း, sarcoidosis လူနာတွေအတွက်အများဆုံးတိုင်ကြားမှုများတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒါဟာသူတို့ရဲ့ဘဝအရည်အသွေးကိုအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းမရှိရိုးရှင်းတဲ့ချက်နှင့်အဓိပ္ပါယ်ရှိပါတယ်ဒါပေမယ့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းစွမ်းအင်သို့မဟုတ်လှုံ့ဆော်မှုတစ်ခုမရှိခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ပြည်သူ့အဘယ်သူမျှမထင်ရှားသောအကြောင်းရင်းနှင့်အတူမောပန်းခြင်းတစ်ခုလွှမ်းမိုးသောအသိကြောင့်ကိုဖော်ပြရန်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အတိအကျတိုင်းတာသို့မဟုတ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူပြသရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
sarcoidosis လူနာအများစုမှာရောဂါ၏အချိန်မှာပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏လက္ခဏာများကိုပြသ။ ဒါဟာဖြစ်နိုင်ရောဂါ၏ရောင်ရမ်းဖြစ်စဉ်ကိုခံစားရစေပါသည်။ အခြို့သောပရိုတိန်း (cytokines) ကိုရောဂါကူးစက်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကထုတ်လုပ်လျက်ရှိသည်။ ဤရွေ့ကားပရိုတိန်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ရောဂါလက္ခဏာများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါတယ်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့် Sarcoidosis အကြောင်း Read More ...
အဆိုပါက MS လူ့အဖွဲ့အစည်းအပေါ်အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ရှိပါတယ် စီမံခန့်ခွဲခြင်းပင်ပန်းနွမ်းနယ်။ ဤအချက်အလက်အများစုမှာယေဘုယျအားဖြင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အကြောင်းကိုဖြစ်ပါသည် - က MS မှတိကျသောကဏ္ဍကိုလျစ်လျူရှု။
အဆုတ် Fibrosis များအတွက်လှုပ်ရှားမှုအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အများကြီးရှိပါတယ် အသက်ရှူနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်နှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါအရာ sarcoidosis တစ်ဘုံလက္ခဏာ။
ကနေပင်ပန်းနွမ်းနယ်အကြောင်းကိုပိုမိုသိရှိလိုပါက Medicinenet။ ဤအချက်အလက် sarcoidosis မှတိကျတဲ့မဟုတ်ပါဘူး။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေရှိလူများသာသက်ရောက်သည်နှင့်အပတ်တွင်ကနေတပတ်, နေ့တစ်ရက်, ဒါမှမဟုတ်နာရီမှနာရီမှကိုပြောင်းလဲစေနိုင်သည်။ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏ရောဂါလက္ခဏာများပါဝင်နိုင်ပါသည်:
သငျသညျအိပျပျြောသှားတဲ့အခါသင်ပြုသကဲ့သို့အဖြစ်ပင်ပန်း feeling နှိုးခြင်း။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စမ်းသပ်ပြီးမရနိုငျနှင့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးဖို့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အမြဲမရှိ။ ဒါကအားလုံးကမိတ်ဆွေများ, မိသားစု, လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့်ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုရေးစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများရန်သင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရှင်းပြဖို့ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည်။ သူတို့ဟာ unhelpfully '' နည်းနည်းပိုပြီးကြိုးစားအားထုတ်မှုစေ '' ရန်သင့်အားမေးပါသို့မဟုတ် 'ပျင်းရိဖြစ်ခြင်းကိုရပ်တန့်။ ' 'စခွေငျးငှါ ဒါဟာပြဿနာလူနာနေဆဲတက်ကြွဖြစ်နိုင်မည်အကြောင်းပိုမိုဆိုးရွားများနှင့်လူပေါင်းကောင်းသောစေနိုင်သည် အချို့သော ထိုအချိန်ကာလ၏။ ဒီအလုပျမှာတင်းမာမှုနှင့်လူမှုရေးအခြေအနေများဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။
ဒါဟာ sarcoidosis ကနေလွှတ်အတွက်လူနာနေဆဲပင်ပန်းခံစားရကြောင်းမကြာခဏအမှုဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်အချိန်မှာသည်ဤရောဂါလက္ခဏာများနောက်ဆုံးကြာကြာထက်6လ, က '' နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ဟုခေါ်နိုင်ပါသည်။ ဒါဟာလူနာနာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကနေဆငျးရဲဒုက်ခမည်မျှ sarcoidosis အတိအကျမသိရသည်။
က sarcoidosis နှင့်ဆက်စပ်နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သည့်နာမကျန်းမှုကာလအတွင်းစတင်ကြောင်းရှင်းပါတယ်သော်လည်း, ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏တိကျသောအကြောင်းရင်းမသိရနေဆဲဖြစ်သည်။
နာကျင်မှု (လည်ချောင်း, ဦးခေါင်း, lymph node များ, အဆစ်);
ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်, sarcoidosis ပြီးနောက်နာတာရှည်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သိသိသာသာအသက်တာ၏အရည်အသွေးကိုလျော့နည်းစေပါသည်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ရှာဖွေရေးမှာရန်မတိကျတဲ့, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာစာမေးပွဲရရှိနိုင်ပါသည်။ သို့သော်သင်၏ဆရာဝန်နည်းလမ်းတွေထဲကအတော်များများ၌သင်တို့၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နိုင်ပေမည်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အကဲဖြတ်စကေး: သင့်ဆရာဝန်သုံးပြီးသင်မေးခွန်းများမေးခြင်းအားဖြင့်သင့်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ကိုတိုင်းနှင့်ခြေရာခံစခွေငျးငှါ ပင်ပန်းနွမ်းနယ်အကဲဖြတ်စကေး (Fas) ။
အိပ်စက်ခြင်းသုတေသန: အိပ်စက်ခြင်းက register လုပ်သွားပေးသောပစ္စည်းကိရိယာများချိတ်ဆက်နေတုန်းအိမ်မှာသို့မဟုတ်ဆေးရုံ၌သင်တို့ကိုတညဉ့်အဘို့အအိပ်။ အိပ်စက်ခြင်းမမှန်ထို့နောက်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်၏အကြောင်းရင်းအဖြစ်လျှော့နိုင်ပါသည်။
Actigraph: ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမှတ်တမ်းတင်ထားတဲ့ pedometer အမျိုးအစားအသေအချာပြင်ဆင်ထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာသင်ဘယ်လောက်တက်ကြွတည်စေခြင်းနှင့်မည်ကဲ့သို့ပိုပြီးထိထိရောက်ရောက်သင့်ရဲ့စွမ်းအင်ကိုဖြန့်ဝေရန်။
ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မရောဂါပျောက်ကင်းရှိပါသည်။ တစ်ခုတည်းသောသက်သေကုထုံးပေါင်းစပ်ပြီးဖြစ်ပါတယ် သိမှုအပြုအမူကုထုံး (CBT) နဲ့တွဲပြီးတဖြည်းဖြည်းတစ်အရိုးအကြောအဆစ်များ၏လမ်းညွှန်မှုနှင့်အတူကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုတည်ဆောက်ခြင်း။ သို့သော်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တိုက်ဖျက်ရန်လိမ့်မည်ဟုလူနေမှုပုံစံစတဲ့ရွေးချယ်မှု၏နံပါတ်ရှိပါသည်:
ကျန်းမာနေထိုင်ကြသည်။ ကျန်းမာ, မတူညီကြတဲ့အစားအစာကိုစားကြလော့။ , ဆေးလိပ်သောက်ဖြည့်ညှင်းအတွက်အရက်ကိုမသောက်နှင့်အိပ်ပျော်နေသောမတိုင်မီကော်ဖီမသောက်ပါနဲ့မထားပါနဲ့။
အနာဂတ်ကိုမျှော်ကြည့်ခြင်းနှင့်အစီအစဉ်များကိုအောင်။ တကယ်အစီအစဉ်များကိုကူညီပေးပြုလုပ်ခြင်း။ ဒါဟာအနာဂတ်ဆီသို့ဦးတည်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ပြန်ရှာနေစောင့်ရှောက်ဖို့မ သာ. ကောင်း၏။ ချစ်ရသူစကားပြောနှင့်လှုံ့ဆော်မှုအဘို့သင့်အနီးဆုံး SarcoidosisUK Support Group မှတွေအကြောင်းထွက်ရှာပါ။
ကျန်းမာအိပ်ပျော်နေတဲ့ပုံစံကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား။ သငျသညျနာမငြိမ်သို့မဟုတ်အလင်းအိပ်စက်ခြင်းညအိပ်တွေ့ကြုံခံစားအထူးသဖြင့်ရှိလျှင်အဖြစ်တတ်နိုင်သမျှနည်းနည်း (သို့မဟုတ်မမှာအားလုံး) ကိုတစ်နေ့တာအတွင်းအိပ်ဖို့ကြိုးစားပါ။ တစ်ခုနေ့လည်ခင်းမောအိပ်ကောင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်လည်းမကြာခဏပြုလုပ်ကျန်းမာအိပ်ပျော်ခြင်း-ပါတီအားရစ်သမ်နှောင့်အယှက်ပေးနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့စိတ်ကျန်းမာရေးကိုစဉ်းစားပါ။ sarcoidosis ရှိခြင်းခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပြီးထိုကဲ့သို့သောစိတ်ကျရောဂါအဖြစ်စိတ်ကျန်းမာရေးအခြေအနေအထောက်အကူပြုနိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ SarcoidosisUK သူနာပြုတိုင်ကြားမှု Call သို့မဟုတ်သင်စိုးရိမ်ပူပန်နေကြသည်လျှင်စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကုဖို့ပြောနေတာစဉ်းစားပါ။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့တက်ကြွနေဖို့! မသာကိုယ်ထိလက်ရောက်ဒါပေမယ့်လည်းစိတ်ပိုင်းနှင့်လူမှုရေးအရ, တတ်နိုင်သမျှတက်ကြွနေပါ။ သင်သည်တတ်နိုင်လျှင်, အလယ်အလတ်ပြင်းထန်မှုမှာမိနစ် 30 တစ်နေ့အဘို့တစ်ပတ်ကို5ရက်ပတ်လုံးလေ့ကျင့်ခန်း။
သငျသညျအဆုတ် sarcoidosis ရှိပါသလား sarcoidosis သင့်ရဲ့အဆုတ်ကိုထိခိုက်ပါဘူး။ ပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါ။